WPC gaba remaruva
Freestanding Electric choto
Colorful Flame Home hita
Electric choto PCBA
2018 New Kusvika Phone APP Control Temperature Adjus ...
Njere Electric choto 60 "Size Large ...
Marble Carving choto Hand Carved Natural White M ...
Flame Settings Sideline Electric choto Chinogadzirisa ...
Wood epurasitiki uriri
Shipping Terms: FOB Shenzhen Payment Terms: TT / LC MOQ: 100 Unit Price: tapota taura nesu Size: customized Product DescriptionThe huni-epurasitiki zvinhu zvitsva rudzi zvakapoteredza aesthetic zvokunyama, yakagadzirwa mupurasitiki cellulose (upfu yemishenjere, uswa upfu, ibwe upfu, namatanda upfu) chaiwo process.Its Absorção de Água riri pasi 2/1000 ari ngura nemishonga iri pamusoro gumi nguva pehuni. Product unhu + Waterproof, mwando uchapupu, hapana kuwedzera, hapana deformation, hapana Cracking, N ...
Unit Price: tapota taura nesu
The itsva huni-epurasitiki zvinhu rudzi zvakapoteredza aesthetic zvokunyama, yakagadzirwa mupurasitiki cellulose (upfu yemishenjere, uswa upfu, ibwe upfu, namatanda upfu) chaiwo process.Its Absorção de Água riri pasi 2/1000 ari ngura nemishonga iri pamusoro gumi nguva pehuni.
+ Waterproof, mwando uchapupu, hapana kuwedzera, hapana deformation, hapana Cracking, hapana ora. Inogona kuva usedin ari nyorova kwezvakatipoteredza, apo tsika huni zvigadzirwa havagoni bu kushandiswa.
* Mukati zvipukanana kudzivirira, juru nemishonga, ngura nemishonga, Anti kukwegura, refu upenyu basa.
* Hapana kusvibiswa, pasi kabhoni, mamiriro noushamwari, simba okuponesa uye achine rutapudzo.
* The moto-retardant vegiredhi ndiye B1.It anogona kubudirira kumisa moto isingabereki anyharmful gasi.
* Plasticity Good, mavara, kwete nyore kuti ipere, emapuranga kubata, chinogona kuratidza personalizedmodeling uye unhu.
* Rinogona arovererwe, atoronga, akachekwa, akachera nyore uye nyore kuvaka uye installationsteps, rinoponesa nguva uye mutengo.
* Energy okuponesa, recyclable, zvinoenderana nyika inogona kuenderera mberi mitemo uye zvinodiwa.
Next: Wood epurasitiki ruva bhokisi
The choto dzinowanzotsigi- inoshandiswa kudziyisa uye kushongedzwa
XinYingXin Electronics Technology anotanga yemhando michina uye inobereka nekuve yepamusorosoro zvigadzirwa. With yokuisvonaka uye mukurumbira wakanaka, zvigadzirwa edu dzakakurumbira chaizvo muEurope, North & South America, Australia, Middle East uye East Asia. Kunze, We chamakamisa zvakanaka bhizimisi ukama nyika inozivikanwa mabhizimisi akaita WALMART, THE HOME dhepoti, wokuCanada Tire, MENARDS ...... kugadzirwa Zvivako Our kureba mhiri imwe nzvimbo pamusoro 30000sqm uye gore negore goho electric choto mari gura miriyoni imwe. Kunze kwaizvozvo, tinobudirira mune dzakawanda unhu zvitupa ISO9001, gs, CE, EMC, CSA, Saa uye FSC
Ematongerwo Brick paaivaumba
Ematongerwo musana Manufacturers
Ematongerwo Plastic Products
Ematongerwo Wood Manufacturers
Compression paaivaumba Products
Plastic Zvidhinha Manufacturers
Plastic Building Zvidhinha
Plastic remubatanidzwa Manufacturers
Wood And Plastic hwoupenyu
Wood Plastic hwoupenyu Price
Wood Plastic hwoupenyu Products
Wood Plastic hwoupenyu Properties
Wooden Building Zvidhinha
Wpc ukomba Manufacturers
2018 New Kusvika Phone APP Control Temperature ...
Wood epurasitiki ruva bhokisi
Akatungamirira Simulation Fire Electric Fireplace07
Adress: 7th paburiro, kumabvazuva chivakwa B, weihuada maindasitiri paki, longhua dunhu, shenzhen